Kooxda Barcelona oo isku diyaarinaysa inay iska iibiso xiddigo ay ka mid yihiin Griezmann & Dembele si ay gacanta ugu soo dhigto Weeraryahanka… - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Kooxda Barcelona oo isku diyaarinaysa inay iska iibiso xiddigo ay ka mid yihiin Griezmann & Dembele si ay gacanta ugu soo dhigto Weeraryahanka…
June 9, 2021 at 14:51 Kooxda Barcelona oo isku diyaarinaysa inay iska iibiso xiddigo ay ka mid yihiin Griezmann & Dembele si ay gacanta ugu soo dhigto Weeraryahanka…2021-06-09T14:51:01+02:00 CAYAARAHA
(Barcelona) 09 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso labadeeda ciyaaryahan ee Antoine Griezmann iyo Ousmane Dembele si ay gacanta ugu soo dhigto xagaagan xiddiga naadiga Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland.
20-sano jirkaan Weerarka ka ciyaara ayaa ah mid ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay qaaradda Yurub, waxaana si weyn loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono garoonka Camp Nou, si la mid ah inuu aado dhinaca horyaalka Premier League, gaar ah saddexda kooxood ee Manchester City, Manchester United iyo Chelsea.
Jariiradda Marca ee ka soo baxa dalka Spain ayaa warinaya in Barcelona ay iska iibiso xiddigo ka mid ah safkeeda koowaad suuqa xagaaga haddii ay doonayaan inay lacag badan ku qarash-gareeyaan xiddigo cusub, iyadoo Weeraryahannada reer France ee Griezmann iyo Dembele ay qeyb ka noqdaan dib u dhiska Barca oo ay iska iibiyaan.
Dhinaca kale Philippe Coutinho waa ciyaaryahan kale oo weyn oo la filayo inuu kooxda ka tago, kaasoo la la xiriirinayo tiro ka mid ah kooxda Premier League, sidoo kale waxa ay Calatan diiradda ku haysaa oo xiddigaha ay diri doonto ka mid ah Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Francisco Trincao, Neto iyo Junior Firpo.
Haaland, kaasoo dhaliyey 41 gool dhammaan kulamadii uu saftay tartammada oo dhan xilli ciyaareedkii dhammaaday, waxaana ay Dortmund ku qiimeynaysaa adduun dhan 170 milyan oo gini.
Barca ayaa laga yaabaa inay dareenkeeda u weeciso Weeraryahanka Kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez haddii ay ku guuldareystaan baacsiga loo jiro ciyaaryahanka reer Norway ee Haaland.
Kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga ayaa durbaba ogolaatay heshiisyo ay kula soo saxiixanayso labada ciyaaryahan ee Man City, Sergio Aguero iyo Eric Garcia, kuwaasoo labadoodaba si bilaash ah ugu soo biiri doona kooxda marka qandaraaskoodu dhaco dhammaadka bishaan.
« Real Madrid oo diyaar u ah inay iska iibiso xiddig la la xiriirinayo Kooxda Manchester United
Madaxweynaha Puntland oo kulan gaar ah la yeeshay wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya »